အလုပ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ ကိုယ် ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုသမ္မတသား - The Lifestyle Myanmar
Home News International News အလုပ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ ကိုယ် ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုသမ္မတသား
အလုပ်လုပ်ပြီး ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ ကိုယ် ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုသမ္မတသား
အင်ဒိုနီရှား သမ္မတ ဂျိုကိုဝီ ဝီဒိုဒို ရဲ့သား အငယ်ဟာ ဒီနေ့ စင်ကာပူ လူမှုရေးသိပ္ပံ တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ယူပါတယ်။ ဒီ ဘွဲ့နှင်းသဘင် ကို သမ္မတ ဂျိုကိုဝီ ကိုယ်တိုင်လည်း တက်ပါတယ်။ ဒါလောက်နဲ့ ဖောက်သည်ချစရာ သတင်းမဟုတ်ပါ။
ဂျိုကိုဝီ မောင်နှံ ဟာ ဒီသားကျောင်းတက်စဉ်ကလည်း လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ဖူးရာမှာ မိသားစု ကိစ္စသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော် အဆောင်အယောင် ဘာမှ မသုံး အရပ်ဘက် လေယာဉ်နဲ့ အသံတိတ်လိုက်လာလို့ စင်ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးက မျက်ကလဲဆန်ပြာ အကြိုထောက်ပြီး ဧည့်ခံရဖူးတယ် ။ ဒီ အဖြစ်ကို သင်ခန်းစာယူ သတိကြီးထားတဲ့ စလုံး အစိုးရဟာ ဒီနေ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို သမ္မတ ဟာလီမာ ကိုယ်တိုင် ဘွဲ့နှင်းအပ်ဖို့ စီစဉ်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးယီကွန်း က အမှာစကား ပြောပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတယ် ။
သမ္မတကြီး က ဒီလို humble ဖြစ်အောင် နိဝါတ မင်္ဂလာပြု ရုံ ထက် ပိုတဲ့ စိတ်ဘဝင်ခွေ့ စရာကတော့ သမ္မတကြီး သားဟာ ကျောင်းတက်ရင်း အချိန်ပိုင်းစားသောက်ဆိုင် ကက်ရှာ အလုပ်လုပ်ရင်း မိဘ နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် စံပြု ပြခဲ့တယ် ဆိုတာပဲ ။ ခဏ တဖြုတ် ဟန်ပြ မဟုတ် ၊ သုံးနှစ်ဗျ။
နိုင်ငံ့ မြို့တော် ကို ဂျကာတာ ကနေ နေရာပြောင်းရွှေ့ ဖို့ မာစတာပလန် စီမံကိန်းကြီး ကြောင့်. ကြိုက်သူ မကြိုက်သူ ဝိဝါဒါ ကွဲနေတဲ့ အင်ဒိုပြည်သူများကြားမှာ ကားကြပ်ရင် လမ်းဆင်းလျှောက်ပြီး သားကို ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ ကိုယ် ကျောင်းတက်စေတဲ့ သမ္မတ ဂျိုကိုဝီ ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မှတ်တိုင်ကိုလည်း ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီ မို့. ဒီ ပီအာမျိုး နဲ့ စန်းပွင့် သထက် ပွင့်နေဦးမယ် ထင်ပါတယ် ။
ဘရာဗို အင်ဒို ။
Previous articleအမှိုက်ကနေ ရွှေဖြစ်အောင် သက်သေပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာရဲလွင်
Next articleနေ့မြင်ညပျောက် ဖြစ်ခဲ့ရတာများလွန်းနေတဲ့ အမြန်လမ်း
သူနာမည်မကြီးခင်ကတည်းက သူ့အပေါ် ထောက်ပံ့မှုတွေပေး ချစ်ပေးခဲ့တဲ့ သူ့ဇနီးကို အရမ်းချစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ သူ့သားလေးဟာလည်း ထိုးတာကန်တာတွေ ဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းကိုပါ
မြိုင်ကလေး ဘိလပ်မြေစက်ရုံအနီးရှိ အင်းအိုင်များတွင် ရေအရောင်ပြောင်းပြီး ငါးများ သေဆုံး